Air New Zealand waxay xireysaa Saldhigga Qeybta London: 130 shaqooyin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand waxay xireysaa Saldhigga Qeybta London: 130 shaqooyin
Airlines • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Air New Zealand waxay xireysaa xarunteeda shaqaalaha London oo ah 130 shaqaale duulimaad ah sababo la xiriira saameynta COVID-19 iyo xayiraadaha safarka ee ay soo rogeen dowladaha adduunka. Shaqaalaha kaxeynta ee fadhigoodu yahay London waxay ku shaqeyn doonaan howlahooda ugu dambeeya wadada markay tahay 20 Maarso (Ex Los Angeles). Shaqaale fadhigoodu yahay New Zealand ayaa duulimaadka haray ku shaqeyn doona 21 Maarso. Wadada ayaa markaa la hakinayaa ilaa 30 Juun.
Air New Zealand waxay qorsheyneysay inay xirto saldhigga shaqaalaha qolka iyada oo ka baxeysa wadada Oktoobar 2020.
Maareeyaha Guud ee Air New Zealand Cabin Crew Leeanne Langridge ayaa sheegay in kuwan ay yihiin waqtiyo aan horay loo arag oo ku saabsan shirkadda diyaaradaha isbuucyadii la soo dhaafayna ay soo bandhigeen waqti aan fiicneyn oo shaqaale badan.
Xayiraadaha safarka ee sii kordhaya sababo la xiriira COVID-19 ayaa saameyn weyn ku leh jaaleynta iyo joojinta duulimaadyada. In kasta oo tani ay tahay go'aan adag, haddana waa muhiim innaga qaado tallaabo hadda si masuuliyad leh loogu maareeyo Air New Zealand muddadan adag si loo ilaaliyo duulimaad qaran oo ku habboon mustaqbalka.
Shaqaalaheena fadhigeedu yahay London waxay marwalba ka gudbeen kana sii gudbeen. Waxay si joogto ah u siiyaan adeeg tusaale u ah macaamiisheenna waxaanan si aad ah ugu faraxsanahay saldhigga. Ahmiyadeenu hadda waa inaan taageerno dadkeenna oo aan si dhow ula shaqeyn doonno iyaga iyo ururkooda. ”
Horaantii todobaadkan, Air New Zealand waxay ku dhawaaqday inay dib u eegis ku sameyneyso sicirkeeda sicirka iyada oo laga jawaabayo COVID-19 waxayna la shaqeyneysaa ururada shaqaalaha talaabooyin kala duwan oo lagu yareynayo shaqo biilasha boqolkiiba 30.
Shirkada diyaaradu waxay istaagtay ganacsiga maalintii Isniinta si ay ugu ogolaato waqti ay si buuxda ugu qiimeyso saameynta howlgalka iyo dhaqaalaha ee xayiraadaha socdaalka adduunka. Joojinta ganacsigu wali way taagan tahay.